नेपालमै बन्यो विश्वको अग्लो बञ्जीजम्प, नेपालीलाई निकै सस्तो, कति पर्छ हेर्नुहोस ? (स्थलगत रिपोर्ट सहित) – Complete Nepali News Portal
नेपालमै बन्यो विश्वको अग्लो बञ्जीजम्प, नेपालीलाई निकै सस्तो, कति पर्छ हेर्नुहोस ? (स्थलगत रिपोर्ट सहित)
पर्वतमा निर्माण भईरहेको बन्जीजम्पको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जीजम्प दावी गरिएको बन्जीजम्प माघ महिना सम्ममा संचालनमा ल्याउने तयारीमा निर्माण कम्पनी रहेको छ ।
कालीगण्डकीको खोंच पर्वतको कुश्मा र बागलुङको बलेवालाई ५ सय २० मिटर लामो झोलुंगोमा जोडेर त्यसैमा बन्जीजम्प निर्माण भईरहेको छ । बन्जीजमको उचाई २ सय २८ मिटर हुनेछ । बन्जीजम्पका साथै स्काई साइक्लिङ र स्वीङ पनि निर्माण हुनेछ । नेपाली र विदेशीका करिब १२ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको हो । द क्लिफ कम्पनीको नामबाट बन्जीजम्प संचालन हुनेछ ।
आज हामीले तपाईहरुलाई नेपालमै बन्न लागेको दोश्रो अग्लो बञ्जीज्म्प र यसको बारेमा जानकारी दिन्छौँ । हेर्नुहोस यो भिडियोमा ।